Tampon-trano tsara indrindra Toeram-pisakafoanana sy trano fisotroana kafe In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Tampon-trano tsara indrindra Toeram-pisakafoanana sy trano fisotroana kafe In Eoropa
Tampon-trano tsara indrindra Toeram-pisakafoanana sy trano fisotroana kafe In Eoropa
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 05/12/2020)
Ianao ve ilay karazana olona tia fitsangatsanganana an-tongotra sy fitateram-bahoaka? Ary ity lahatsoratra ity dia tsy ho anao! Isika dia mihevitra fa ny fomba tsara indrindra mba hahita ny sasany amin'ireo toerana malaza Eoropa dia amin'ny alalan'ny sipping Champagne amin'ny tampon-trano lavarangana na Cafe. Ireto misy tampon-trano tsara indrindra trano fisakafoanana sy ny trano fisotroana kafe tany Eoropa mba afaka nahita-mahita amin'ny fomba.
Tampon-trano tsara indrindra trano fisakafoanana sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa: Atlante Star Hotel - Rome, Italia
Rehefa in Roma, mila mahita ny toerana tsara sy taloha rehetra ianao - toy ny Colosseum na ny loharano Trevi. Fa ianareo koa mba manana ny manana fomba fijery tsara tarehy tao an-tanàna. ary, tampon-trano, rehefa nitsidika ny hidin'i Atlante Star Hotel manana fomba fijery roa firenena. Izany no antony heverinay fa iray amin'ireo trano fisakafoanana sy kafe any an-tampon-trano tsara indrindra any Eropa!
Ankafizo lovely fomba fijery ny Vatican City ary Roma, rehefa manana kafe expresso na iray vera divay. Tsy maro ny safidy mba hifarana andro iray tsara lavitra noho ny eto!
Nankany Roma lamasinina
Fast fiaran-dalamby avy any London ho any Roma hitondra manodidina 14 ora, nandrakotra lavitra ny eo ho eo 1,434 kilaometatra. Misy matetika ny tolotra momba ny rail lalana eo London sy Roma. Lamasinina Ary noho izany dia misokatra ho an'ny famandrihana matetika manodidina 12 volana mialoha. Raha mbola tsy misokatra ny famandrihanao ho an'ny datinao dia azonao atao ny mametraka fampandrenesana famandrihana handraisana mailaka amin'ny andro misy ny tapakila mora indrindra amin'ny dia ataonao avy any Londres mankany Roma amin'ny lamasinina. Use Save A Train manafatra haingana sy mora!
Tampon-trano tsara indrindra trano fisakafoanana sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa: The Cube Bar - Galeries Lafayette - Paris, Frantsa
Fa iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny toe-tsain'izy Paris, doha niakatra ho any amin'ny tampon-trano ny Galeries Lafayette trano fivarotana. Rihana fito ny, 1500m izany lavarangana manome ny tena manaitra 360 ° View over Paris. Ny Opera House dia akaiky dia akaiky sy ny Tour Eiffel dia ny resahana. Saingy tsy momba ny fomba fijery, fa ny terrasika koa dia mitazona bara tafo maoderina sy marevaka antsoina hoe The Cube Bar.
Open-rivotra sy ny voajanahary amin'ny fametrahana, Manolotra ny lavarangana ny seza na amin'ny masoandro sy ny faritra mitafo kokoa ao amin'ny alokaloka. Avy amin'ny tampon-trano fisotroana, dia afaka hanafatra ny labiera mangatsiaka, mamelombelona Molotov miaraka amin'ny sasany Paris izay ahitana fitambaran tsakitsaky. Azo antoka fa io no iray amin'ireo trano fisakafoanana sy kafe any an-tampon-trano tsara indrindra any Eropa, dia ho fotoana tsara mba haka toerana!
Nankany Paris lamasinina
London dia malaza hanombohana ho an'ny mpandeha maro eo amin'ny Eoropeana vakansy. A fohy sy mampahazo aina mitaingina fiaran-dalamby mampifandray ny renivohitra amin'ny British Frantsa an-tanànan'i ny fitiavana, Paris.
Tsy misy afa-tsy iray mihazakazaka mivantana fiaran-dalamby avy London ho any Paris: ny Eurostar fiaran-dalamby haingam-pandeha. Ka dia mahatonga fisafidianana ny tsara nampiofana kely mora kokoa! Ho azo antoka ianao ny fiaran-dalamby mividy tapakila ny alalan 'Save A Train aza!
Tampon-trano tsara indrindra trano fisakafoanana sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa: Aria Hotel High Note Sky Bar - Budapest, Hongria
Aria Hotel High Note Sky barany Budapest manolotra 360-ambaratonga lehibe heverina ny Buda sy Pest. Izany dia hita ao amin'ny ny fon'ny Pest, fotsiny indray mitora-bato hiala St. Stephen ny Basilica. Izany glamorous stylish fisotroana manana tena miala voly Vibe, Ary ny lalana marina hankafy Budapest miaraka amin'ny family sy ny namany.
Nankany Budapest lamasinina
The fiaran-dalamby niala tao London ho any Budapest azo antoka, mora sy takatry ary maka fotsiny 24 ora, amin'ny Eurostar amin'i Paris sy ny haingam-pandeha TGV avy any Paris ho any Munich, avy eo natory ny alina Budapest. Sa misy fifandraisana amin'ny alalan'ny Paris sy Munich, na amin'ny alalan'ny Brussels, Cologne & Vienna.
Tampon-trano tsara indrindra trano fisakafoanana sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa – Barcelona
1881 isan-SAGARDI dia ny trano fisakafoanana ny History Museum ao Catalonia, toerana tsy manam-paharoa ao an-tanàna tazana ny seranan-tsambo an'i Barcelona sy nanolo-tena tanteraka ho any Mediterane nahandro, hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny tanety. izany traikefa dia vita tamin'ny Terrace ny Indianes, izay niara-belona lavarangana molotov fisotroana tazana ny seranan-tsambo ny Barcelona.
Nankany Barcelona lamasinina
Mora ny nandeha avy amin'ny UK ny Espaina lamasinina. Ny maraina Eurostar ho Paris tamin'ny 2h20 avy £ 44 iray-lalana na hiverina £ 58, sakafo atoandro tao amin'ny toeram-pisakafoanana Bleu Train miavaka ao amin'ny Gare de Lyon, avy eo ny tolakandro avo roa heny-tokotanin-tsambo TGV Duplex ny Figueres (ho an'ny Salvador Dali mozea), Girona & Barcelona from € 39 isan-làlana. *Prices foto-kevitra ny hiova.
Vonona ny entana ny harona ary mitsidika ny toeram-pisakafoanana tsara indrindra tampon-trano sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa? aoka Save A Train mikarakara ny mahazo anao izay tokony ho!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restaurants-cafes-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / de ny / nl na / fanononana kokoa fiteny.
#Best Cafe #BestEuropeRestaurant #BestRestaurants #cafeview #restaurantview #tampon-trano europetravel longtrainjourneys Tranride Train Travel
Nahoana Winter Train Travel any Italia dia tsy maintsy